Naqamtee: Waraanni Mootummaa Xophiyaa Ummata Waaqeeffannaaf Walgahe Irratti Dhukaasuun 5 Ajjeesee Kaaniis Miidhaa irraan Gahee Jira.|OROMSIIS ONLINE
Waraanni Mootummaa Gaafa 1/1/2021 Ummata Waaqeeffannaaf Walgahe irratti dhukaasuun Nama 5 Ajjeesuun 20 Caalaa madeeysuun Miidhaa irraan gahee jira.
“Har’a barii tilmaamaan Naannoo sa’a 10 fi 11 gidduu Bulchiinsa Magaalaa Naqamteetti kan argamu Waldaa Araara Waaqayyoo jedhamu fuulduratti, miseensota waldichatti seenuuf hiriiranii jiranirratti dhukaasa Poolisiin Humna Addaa Oromiyaa baneen namoota 7 olitti tilmaaman irra miidhaan qaamaa ga’uu miseensi waldichaa OMNtti himeera.
‘Waldaan Araaraa Waaqayyoo Addunya’ jedhamu kun torbaanitti yeroo adda addaa sagantaa kadhataa namoota adda addaaf ni taasisa. Hordoftoonni amantaa kiristaanaas biyya addaafi bakka adda addaati waldichattu ni argamu, guyyaa tokkotti namoota kumaatamaan lakka’amantu bakka sana dhufa” kan jedhu miseensi Waldaa sanaa OMN dubbise, har’a barii garuu waan kana dura mullatee hin beeknetu Waldittii mududate jedha.
“Lafa barii tilmaamaan sa’a 10-11tti yeroo ta’u, akkuma yeroo kaanii hordoftoonni dhufanii waldichatti seenuuf hiriira qabatanii turan. Namoonni gariin ol seenaniiru, gariin ammoo ol seenuuf hiriirarra jiru. Kana gidduutti dhukaasni dhaga’ame. Dhukaasni kun maalif akka baname garuu amma yoona adda hin baafatinan jira.” jechuun kan dubbatu namni kun, dura yeroo dhukaasni banametti samiitti ol qabanii dhukaasaa waan turaniif namoonni rifatanii bakkicha baqachuu akka eegalan dubbata. Yeroo fiigan sanatti “namoonni hedduun walirra ejjetanii wal miidhaniiru. Uffannaan, kopheefi meeshaaleen adda addaa lafatti kufee amma dhihoo funaamaa ture” jechuu haalicha hima.
“Ergasii as garuu poolisiin humna addaa kun Dhukaasa marsaa lammataa bananii, namoota haalli tasgabbaa’era jechuun bakkichatti deebi’an irra miidhaa geessisuu ija kiyyaanan arge” jechuun poolisoonni uummatatti gad qabanii dhukaasuudhaan namootni gariin miillarra, harkarraafi bakka biraa rukutamuu ijaan arguusaa hima namni kun.
Namoonni rasaasaan miidhaman gara mana yaalaatti geeffamuun waldhaansa argachaa jiraachuu dubbachuun amma ammaatti nama balaa kanaan lubbuun darbe akka hin dhaga’inis dubbata.
OMM dhimma kana qulqulleeffachuuf ogeessa Fayyaa Hospitaala Riferaala Naqamtee bilblaan dubbisee ture. Ogeessi kun sagalee kennuuf hayyamama akka hin taane himuudhaan, dhimmichi dhugaa ta’uu mirkaneesse.
“Hanga ammaatti nama ajjeefame arguu baatus, namoonni 10 ol ta’an miidhamanii Hospitaala keenyatti waldhaansa argachaa jiru” jechuun hima.
Jiraataan magaalaa Naqamtee kan biraan ammoo yaada miseensa waldichaa dubbisneen wal fakkaatu OMN’iif keenuudhaan, “yaaddoo hamaa keessa jirra. Namni ajjeefamuun bartee ta’a jira. Lubbuun namaa darbuufi miidhamuu dhala namaa akka qoosaatti ilaalamuu erga eegalee tureera. Poolisoonni dhukaasa kana raawwatan uffannaa poolisii Oromiyaa fi Konkolaataa Poolisii magaakichaa fayyadamanis afaan Oromoo hin beeknetti caalu. Maqaa WBO qulqulleessuu jedhuun poolisii humna addaa Naannii Amaaraatu Wallagga keessa jira. Gara laafinaafi mararfannaa malee uummata keenya miidhaa jiru. Jibba sabummaafi amantaa waan qabaniif itti yaadanii gara Waldaa Araraa waan dhaqaniin se’a. Malee Waldadaan Araaraa erga magaalichatti hojii eegalee waggaa 6 ol ta’eera. Har’a maaltu haaraa taanaan balaan kun qaqqaba. ” jechuun taateen kun itti yaadamuudhaan waan raawwatame ta’uu heera.
Miseensi Waldaa Araara Waaqayyoo OmN dubbise kun akka jedhutti, yeroo ammaa haalli Naannoo mana amantaa sanaa nagaadha. Rakkoon baayyee hin jiru. Poolisiin ammaaf bakka sana had dhiisees deemeera jedha. “Garuu rifaatuun uummataa ammallee inuma jira.” jechuun hima.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf Kantiibaa Magaalaa Naqamtee kan ta’an Obbo Tamasageen Bariisoof irra deddeebiin bilbillus bilbila hin kaasan.”